तुलना गर्नुहोस् निन्दा को मूल्यांकन - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2020-03 > न्यायाधीश न्यायाधीश तुलना गर्नुहोस्
तुलना, मूल्यांकन र न्याय गर्नुहोस्
हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जुन मुख्यतया आदर्श वाक्यका अनुसार जिउँछन्: "हामी असल छौं र अरु सबै खराब छन्"। प्रत्येक दिन हामी समूहहरू अन्य व्यक्तिलाई राजनैतिक, धार्मिक, जातीय वा सामाजिक-आर्थिक कारणका लागि कराइरहेको सुन्छौं। सामाजिक मिडिया यो खराब बनाउँछ। हाम्रो विचार हजारौंको लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ, हामी चाहन्छौं भन्दा पहिले, हामी शब्दहरू चिन्तन र तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया गर्ने मौका पाउनु भन्दा धेरै अघि। पहिले कहिल्यै फरक समूहहरूले एक अर्कालाई यति चाँडो र यति ठूलो स्वरले कराउन सकेको थिएन।
येशूले मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने फरिसी र कर कलेक्टरको कथा बताउनुहुन्छ: "दुई जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिर गए, एक फरिसी, अर्को कर उठाउने" (लूका १::१०)। यो "हामी र अरु" को बारेमा क्लासिक दृष्टान्त हो। फरिसी गर्वसाथ घोषणा गर्दछन्: «म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु, भगवान, कि मँ अरु मानिसहरु, डाकुहरु, अधर्मी मानिसहरु, व्यभिचारीहरु, वा यो कर उठाउने जस्तै छैन। म हप्तामा दुई पटक उपवास बस्छु र मैले लिने सबै चीजको दशांश दिन्छु। तर कर उठाउने, टाढा उभिए र आफ्नो आँखा स्वर्ग मा उठाउन चाहँदैनन्, तर उसको छाती मा हिर्काएर भने: भगवान, म पापी दयालु हुनुहोस्! (लूका १:: ११-१३)।
यहाँ येशू आफ्नो समय को अतुलनीय "हामी अरुको बिरुद्ध" परिदृश्य को वर्णन गर्दछ। फरिसी शिक्षित, सफा, र धर्मी छन्, र उहाँको नजरमा के सही छ। उहाँ "हामी" टाइप हो कि एक पार्टीहरु र समारोहहरुमा आमन्त्रित गर्न चाहानुहुन्छ र एक छोरी संग बिहे गर्ने सपना देख्छ। कर कलेक्टर, अर्कोतर्फ, "अरु" मध्ये एक हो, उसले रोम को कब्जा शक्ति को लागी आफ्नो मान्छे बाट कर स collected्कलन र घृणा गरिएको थियो। तर येशूले आफ्नो कथा यस वाक्यांशको साथ समाप्त गर्नुभयो: «म तिमीलाई भन्छु: यो कर उठाउने आफ्नो घर जायज ठहरियो, त्यो होइन। किनकि जसले आफूलाई उच्च बनाउँछ ऊ नम्र हुनेछ। र जसले आफूलाई नम्र बनाउँछ ऊ उच्च हुनेछ »(लूका १::१४)। नतिजाले उसको दर्शकलाई चकित बनायो। यो व्यक्ति, यहाँ स्पष्ट पापी, कसरी धर्मी हुन सक्छ? येशू गहिरो भित्री के भइरहेको छ उजागर गर्न मनपर्छ। येशू संग कुनै "हामी र अरु" तुलना छैन। फरिसी एक पापी साथै कर उठाउने व्यक्ति हो। उहाँका पापहरु कम स्पष्ट छन् र अरुले उनीहरुलाई देख्न सक्दैनन्, यो "अरु" मा औंला औंल्याउन सजिलो छ।
जबकि यस कथा मा फरीसी आफ्नो आत्म-धार्मिकता, पापीपन र गर्व स्वीकार गर्न को लागी इच्छुक छैन, कर कलेक्टर आफ्नो अपराध बोध गर्दछ। तथ्य यो हो, हामी सबै असफल भयौं र हामी सबै एकै निको पार्ने को आवश्यकता छ। «तर म परमेश्वरको सामु धार्मिकताको कुरा गर्दैछु, जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर विश्वास गर्ने सबैलाई आउँछ। किनकि यहाँ कुनै फरक छैन: उनीहरु सबै पापी हुन् र महिमा को अभाव छ कि उनीहरु परमेश्वरको सामुन्ने मानीन्छन्, र ख्रीष्ट येशू को माध्यम बाट आएको छुटकारा को माध्यम बाट उहाँको अनुग्रह बाट योग्यता बिना धर्मी ठहरिएका छन् Roman (रोमी ३: २२-२४) ।
निको पार्ने र पवित्र पार्ने काम येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा विश्वास गर्नेहरू सबैको लागि हो, जो यस विषयमा येशूसँग सहमत हुन्छन् र यसैले उसलाई उहाँमा जिउन दिन्छन्। यो "हामी अरूको विरुद्धमा" होईन, यो हामी सबैको बारेमा हो। अन्य व्यक्तिको न्याय गर्नु हाम्रो काम होइन। हामी सबैलाई मुक्तिको आवश्यकता छ भनेर बुझ्न यो पर्याप्त छ। हामी सबै परमेश्वरको कृपा पाउने छौं। हामी सबैको एकै मुक्तिदाता छ। जब हामी अरूलाई उसले जसरी देख्छौं त्यसरी नै मद्दतको लागि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्छौं, हामी तुरुन्तै बुझ्दछौं कि येशूमा हामी र अरू कोही छैनन्। पवित्र आत्माले हामीलाई यो बुझ्नको लागि सक्षम पार्नुहुन्छ।